प्रायश्चित | मझेरी डट कम
Vatsa78 — Mon, 06/18/2012 - 21:03
द्वन्द पीडित बालबालिकाको सहयोगको लागि श्यामले गरेको योगदानलाई सम्झेर आज पुरस्कृत गरिएको छ । द्वन्द पुरै समाप्त भएको छैन तर त्योभन्दा बढी त्यसले बनाएका घाउ, चोट र दागहरू छन् । पुरस्कार सहितको प्रमाण पत्र भित्तामा झुनड्याउछ खाटमा पल्टिदै आफ्ना अतित सम्झन पुग्छ ।
ऊ पढ्न पनि राम्रै थियो । अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि ऊ कम थिएन । गाउमा केही पर्दा अघि लाग्थ्यो । सबैले माया नै गर्थे । समग्रमा जेहेन्दार बिद्यार्थी र असल छोरो थियो ऊ । सायद त्यसैले होला नेताहरूको आँखामा ऊ पर्यो । शुरुका दिनमा त ऊसँग तिनले कहिलै राजनीतिमा लाग्न भनेनन् । तर बिस्तारै आफ्ना कार्यक्रमहरूमा लाने गर्न लागे । नेताहरूका भाषण चर्का हुन्थे । समाज परिवर्तन, धनी गरिब विभेद, शिक्षामा समान अवसर यस्तै यस्तै ।
एउटा पढ्ने बिद्यार्थी जसले छात्रबृत्तिमा ठुलाबडाको मात्रै पहुँच हुन्छ सुन्छ । गाउलाई आधार बनाएर राजनीति गरेका मन्त्री भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा बिदेशमा सन्तानलाई पठाएर ब्यापार गरिरहेको सुन्छ, गरिबलाई अवसर नदिइइने सुन्छ । ऊ बिस्तारै बिद्रोही हुदै जान्छ । उसमा विद्रोहको बिउ रोपिदै जान्छ । अन्तमा उसले पनि हतियार उठाउने निर्णय गर्छ । ऊसँगै उसका धेरै साथीहरू जनयुद्धमा होमिन्छन । उसको युवा नेतृत्व पाएर पार्टी नेतृत्व खुसी हुन्छ । उसलाई बिस्तारै राम्रै जिम्मेवारी दिदै जान्छ । जनसेनामा उसको समुह हरेक अफ्ट्यारा युद्धहरूमा अग्रमोर्चामा हुन्छ ।
जति जति नेतृत्वको नजिक पुग्दै जान्छ, भित्रका बिकृतिहरू नजिकबाट देख्दै जान्छ । ऊ त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउँछ । तर ऊ नेतृत्वको नजिक पुगेका केहीको तारो हुन पुग्छ । अचानक ऊ सहितको उसको समुहलाई योजना बिनाको युद्धमा जान निर्देशन दिइन्छ । पार्टीको निर्देशन मान्दै ऊ युद्धमा होमिन्छ । दुवैतिरका धेरै सेना मारिन्छन । मान्यताले उसको गोली नछेकेको भए उसको पनि प्राण पखेरु त्यही समाप्त हुने थियो । मर्ने बेलामा मान्यताले भन्छे - तिमी युद्धमा लागिरहे मारिन्छौ, या विरोधीको गोलीबाट या आफ्नै नेतृत्वको गोलीबाट । यो सुनेर श्याम छक्क पर्छ ।
उसले भन्छे -गलत कुरा सुन्न नसक्ने तिम्रो बानी, नेतृत्वमा बस्ने केहीका लागि पाच्य छैन ।
तिम्रो काम मन पराउनेभन्दा आफ्नो बिरोध सुन्न नसक्नेहरू हावी हुदै गए । तिमी अहिले नै यहाबाट भाग अब तिमी सुरक्षित छैनौ । मृत्यु कुर्दै गरेकी मान्यताले लिएको कसमको अगाडि ऊ निरीह भयो । ऊ युद्धबाटै शहर पस्यो ।
अनि आज उसले फेरी धेरै दिनपछि मान्यतालाई सम्झियो, सँगै युद्धमा मारिएका आफ्ना साथीहरूलाई सम्झियो अनि ती बिरोधि सेनालाई । मान्यताले कैले प्रेम प्रकट गरिन तर सधै प्रेम गरी । युद्धकालभरि सधै उसले श्यामको सहयोगी भएर बिताई । युद्धमा मिठो खान पाउनु गहारो थियो, जब केही मिठो पाउँथी श्याम कहाँ आइपुग्थ्यो । एकपटक युद्धमा श्याम सामान्य घाइते हुँदा पनि ऊ रातभरि नसुती स्याहरेकी थिई । श्यामलाई लाग्ने गोली छेकेर उसले प्रेममा समर्पण देखाएकी थिई । उसको त्यो समर्पण बन्दुक बोक्नेमा प्रेम मरिसकेको हुन्छ भन्नेलाई राम्रो जवाफ थियो । बास्तवमा मान्यता जीवित हुन्जेल श्यामले कहिलै उसको बारेमा सोचेन तर मर्दामर्दै उसले सोच्न बाध्य पारी । उसले मान्यतासँग बिताएका प्रत्येक पल सम्झियो ।
उसले आफ्ना दौतरीहरू सम्झियो जो उसको उक्साहटमा जनयुद्धमा सहभागी भए । प्रत्येक पल ऊसँगै भए । उसको छाया भएर बसे । श्यामका प्रत्येक निर्णयलाई बिना कुनै बिबाद स्वीकार गरे । जनयुद्धमा जादा उसका साथीका बाउ आमाले नजान धेरै आग्रह गरेका थिए । तर तिनले श्यामको कुरा सुने । तर श्याम आज एक्लो छ उसका साथीहरू मारिए । युद्धबाट भागेपछि उसलाई भगौडा भनियो रे । पार्टीबाट निष्काशित गर्दै भेटे कारवाही गर्न भनियो रे । आज सम्झिन्छ उसले गाउमा ठुला बुज्रुग्लाई गरेको व्यवहार । ती उसका पिता समान थिए । सबैभन्दा बढी माया पाउने श्यामले आज गाउँभित्र शत्रु कमाएको छ । डर र ग्लानि दुवै छ उसमा ।
शहर पुगेपछि ऊ सारै बिरामी परेको थियो । जंगलको बास नखानेको ठेगान न सुत्नेको । शायद त्यसकै कारण हुनुपर्छ ऊ कमजोर र रोगि बनेको थियो । उसलाई स्याहार्न शितल दिदीले केही कसुर छोडिनन । हुन त नाता घरबेटीको मात्रै थियो तर दिनरात गरेर श्यामलाई स्याहारेकी थिइन । एउटी बिधवा आइमाई साना साना नानि हुर्कौदै श्यामलाई स्याहारेकी थिन ।
उनका अबोध छोरा छोरी आमालाई सोध्थे आमा बाबा खै ?
उनी भन्थिन - कालले लग्यो बाबु । उसलाई बुबा एकदम मन पर्यो रे ।
उसले एक दिन शितलको पुरा परिवारको हाँसिरहेको तस्विर देख्छ । सँगै उनको श्रीमानको झुण्डाइएको तस्विर देख्छ । मालाले छोपिएको उनको अनुहार नियालेर हेर्छ । उसका आँखाहरू अडिनछन । हो उसले युद्धमा मारेको सैनिकको हो त्यो । ऊ पश्चातापमा पिल्सिन्छ । उसलाई मारेको क्षण श्याम कराएको थियो । त्यो सैनिक उसले मारेको पहिलो व्यक्ति थियो । मरेपछि उसले हर्ष मनाएको थियो । आज फोटोमा देखिएको त्यो हसिलो परिवारलाई उसले रुवाएको छ । जसबाट उसले यति धेरै माया पाएको छ उसलाई बिधवा बनाएको छ ।
श्याम रातभर सुत्न सकेन । उसले आफ्नो अतित पुरै पल्टायो । उसले आज आफूलाई जीवन दिने मान्यताको साँचो प्रेम गुमाएको छ, साथीभाइ र गाउँको स्नेह गुमाएको छ । अनि आफूलाई निस्वार्थ सेवा भावले पुनर्जीवन दिने दिदीलाई बिधवा र तिनको सन्तानलाई अनाथ बनाएको छ । उसले सबै नेता गलत साबित गर्न सकेन । देशलाई परिवर्तन चाहिएको छ नेतृत्व तिनले नै गर्ने हो । हो असलभन्दा खराब हावी भएको हो । उसले निष्कर्ष निकाल्यो । उसको आँखामा ती अनाथ सैनिकका सन्तान आईरहे । बिहानको उज्यालोसँगै जसरी पनि तिनको लागि केही गर्ने प्रण गर्दै ऊ निस्कियो ।
बर्षौंको मेहनतपश्चात आज ऊ द्वन्द पीडित अनाथ बालबालिका लागि सहयोग केन्द्र सफलता पुर्वक चलाउन सफल भएको छ । आज उसको सहायता केन्द्रमा युद्धरत दुवै पक्षका अनाथ सन्तानले आश्रय पाएका छन ।
अब हाम्रो मायाँको.....
नसोचेको भेट थियो..
सुन्य मात्र हात लाग्यो
लियोनारा र मन !!!
न मातै छ बाँकी
म त पहिरोभित्र छु
टाढा टाढा नभइजाऊ तिमी
नयाँ बर्ष तिमी खुशीको अंकुर लिएर आउँछ्यौ कि
आज मेरो सिंगो आकाश खसेको छ
अहँ! अब उनी बोल्दिनन् !